Bit By Bit - Introduction - 1.5 Outline bhuku
Bhuku rino rakarongwa dzakapoteredza kunoita kuburikidza mana paupamhi tsvakurudzo Nzira: nokucherechedza maitiro, vachibvunza mibvunzo, achimhanya kuedza, uye nokusika vakawanda kubatsirana. Ava vana Nzira yaishandiswa zvose mune dzimwe muchimiro makore 50 adarika, uye ndine chivimbo chokuti vachaita zvose kushandiswa mune zvimwe muchimiro 50 makore kubva ikozvino. Ndava vakazvitsaurira munhu chitsauko chimwe nechimwe kusvika. Zvitsauko zvakawanda vane chikamu vakazvipira mimwe mutsoropodzo, waishandiswa kana nhoroondo okuwedzera, uye zvinhu zvinogona kushandiswa mukirasi kana kuti kuzvidzora kudzidza. Nemhaka iyi features, Ndava kuchengeta dzeShanduro sezvo nyore sezvinobvira; unogona kureva izvi zvimwe zvikamu zvitsauko kana uchida mamwe mashoko uye anowanika papi mumba mabhuku.
Muchitsauko 2 (Kucherechedza maitiro), ndichaita kutsanangura chii sei uye vatsvakurudzi vangadzidza nokucherechedza maitiro evanhu. Kunyanya, Ndichaenda kufunga digitaalinen zvisaririra Data uye okutarisira Data apo nevatsvakurudzi akanga asina basa pakusikwa mashoko. Ndichaenda kurondedzera zvakajairika zviri pamusoro mashoko mhando ichi, uye ndichanwisa tsanangura tsvakurudzo nzira inogona kushandiswa zvinobudirira kudzidza kubva akaona maitiro.
Muchitsauko 3 (Kubvunza mibvunzo), I uchatanga nokuratidza chii Vanotsvakurudza vangadzidza nokutamira zvinopfuura nokucherechedza maitiro uye kutanga kuwadzana nevanhu. Kunyanya, ndichaita nharo kuti pane kukosha zvikuru pakuita tsvakurudzo ongororo, kunyange munyika yakazara hunotovapo digitaalinen mashoko. Ndichaita dzokororai chinyakare vanosvika ongororo kukanganisa framework uye kurishandisa kuronga zviitiko kuti digitaalinen zera inoita pakutsvakurudza ongororo. Kunyanya, ndicharatidza kuti digitaalinen zera kungaita kuti ndaifanira kuchinja zvakabudiswa uye nokubvunzurudza. Pakupedzisira, Ndichaenda kutsanangura nzira mbiri kusanganisa ongororo Data vane digitaalinen chero Data. Pasinei netariro kuti vamwe Ongororo vatsvakurudzi pari kunzwa, Ini kutarisira kuti digitaalinen zera achava yendarama zera kutsvakurudza ongororo.
Muchitsauko 4 (Kupererwa kuedza), I uchatanga nokuratidza chii Vanotsvakurudza vanogona kudzidza kana vachifambira mberi vachiona maitiro uye achibvunza mibvunzo ongororo. Kunyanya, ndicharatidza sei randomized dzinodzorwa kuedza-apo nevatsvakurudzi anopindira munyika kwazvo chaizvo nzira-vakwanise vatsvakurudzi kudzidza pamusoro causal ukama. Ndichaita enzanisa marudzi kuedza kuti tinokwanisa kuita kare pamwe nemhando zvatingaita ikozvino. Uchifunga, Ndichaenda kutsanangura kutengeserana-offs munyaya mbiri nzira huru kuitisa digitaalinen kuedza. Pakupedzisira, ndichaenderera kugumisa nevamwe magadzirirwo zano pamusoro sei unogona kushandisa simba chairo digitaalinen kuedza uye tsanangura vamwe basa kuti unouya kuti simba.
Muchitsauko 5 (Kuumba vakawanda kutsigirana), ndicharatidza sei vatsvakurudzi anogona kusika vakawanda collaborations-zvakadai crowdsourcing uye mugari nesayenzi-kuitira kuita munzanga tsvakurudzo. Nokurondedzera kubudirira guru kutsigirana muzvirongwa uye nokupa kiyi pakuronga pfungwa shoma, ndinovimba kuti imi nechokwadi zvinhu zviviri: chokutanga, kuti vakawanda kutsigirana inogona evanhu tsvakurudzo, uye chechipiri, kuti vaongorori vanoshandisa vakawanda kutsigirana achakwanisa kugadzirisa matambudziko ndambodzidza hazvaigona. Kunyange zvazvo vakawanda kutsigirana kazhinji kusimudzirwa senzira kuchengetedza mari, zviri zvikuru kupfuura. Misa kutsigirana haangonzwiri unotipa kutsvakurudza isingadhuri; zvinoita kuti tiite tsvakurudza nani.
Muchitsauko 6 (Ethics), ndichaita nharo kuti vanotsvakurudza kukurumidza kuwedzera simba pamusoro vechikamu, uye kuti nezvaanogona awa kuchinja nokukurumidza kupfuura dzemunharaunda edu, mitemo, uye mitemo. mubatanidzwa-kuwedzera uku simba uye kushaya chibvumirano sei kuti simba zvinofanira kushandiswa mashizha vavariro vatsvakurudzi mumamiriro ezvinhu akaoma. Kugadzirisa dambudziko iri, ndichaita nharo kuti vaongorori vanofanira kupfeka zvinotaurwa nemabhuku kusvika. Ndiko, vatsvakurudzi vanofanira kuongorora kwavo tsvakurudzo kuburikidza mitemo-izvo huripo ndichatora sezvo wakapiwa-uye kuburikidza zvetsika zvine chokuita mamwemazwi. Ndichaenda zvamaronga ina yakasimbiswa nheyo maviri zveupfumi yetsika nemagariro inogona kubatsira kutungamirira zvaunosarudza. Pakupedzisira, Ndichaenda kutsanangura uye ongorora dzimwe dzakananga matambudziko yetsika nemagariro Ini kutarisira kuti anosangana vatsvakurudzi munguva yemberi, uye ndichanwisa kupa mazano mazano nokuda kushanda munzvimbo pamwe hwetsika kugadzikana.
Pakupedzisira, muna chitsauko 7 (The yemberi), ndichaita muchidimbu misoro mitatu kuti recur mhiri zvitsauko uye kuti vachava kukosha mune ramangwana.
tsvakurudzo Social vari digitaalinen zera kuchaita sangana zvataita kare pamwe akasiyana chaizvo nezvaanogona nezveramangwana. Saka, munzanga nokutsvakurudza zvichaita kuumbwa nevanhu magariro masayendisiti uye mashoko masayendisiti. Mumwe boka rine chinhu kupa, uye mumwe nomumwe boka rine chinhu kudzidza.